ceh v10 - isifundo sokuhlolwa kokubhala bhala
none Ukuphepha I-CEH v10 - Thumela Isifundo Sokubhala Bhala
I-CEH v10 - Thumela Isifundo Sokubhala Bhala
Ngisanda kuthatha isivivinyo se-CEH v10 ngaphasa. Kulokhu okuthunyelwe, ngifingqa isipiliyoni sami ekuphishekeleni indlela yokuba yiHacker Ethical Certified.
Sethemba ukuthi uzothola lokhu okuthunyelwe kuwusizo ekutadisheni, ekulungiseleleni nasekuphasiseni ukuhlolwa kwe-CEH.
Bengisebenza ku-IT cishe iminyaka engama-20. Ngiqale njengoMthuthukisi weJava ekuqaleni kuka-2000 futhi iminyaka engu-15 edlule ibibambe iqhaza elikhulu ekuhloleni ukusebenza, ukuhlolwa okuzenzakalelayo, nasekuqinisekisweni kwekhwalithi.
Ngaqala uhambo lwe-CEH cishe ngingenalo ulwazi lokuxhumana futhi cishe ngingenalo ulwazi lokuphepha.
Uma ungangibuza noma yini mayelana nokulandelayo, bengingeke ngibe nomkhondo!
I-CIA triad nezisekelo zokuphepha
Isibonelo se-TCP / IP
Axhumana kanjani amakhompyutha kunethiwekhi
Ukuskena kwenethiwekhi nePort / Ukubala
Yiziphi izinqubo ezihlukile zokuxhumana
Izinombolo ezibalulekile zetheku
Ukuhlaselwa kwenethiwekhi, i-MAC Flooding, i-DHCP Indlala, ukuhlaselwa kwe-ARP
Ukuphamba, ukuhogela, ukuhlaselwa kweMitM
Izinhlobo ezahlukahlukene zama-cryptography algorithms nokuhlaselwa okuhambisanayo
Namathuluzi ahlukahlukene angama-100 angasetshenziswa ekugenceni
I-NMap, iWireshark, iMetasploit
Futhi lokhu kumane nje kuyiphuzu leqhwa. Kuneminye imiqondo nezindlela eziningi ezingekho ohlwini olungenhla. Ungabona ukuthi kulowo oqalayo emkhakheni wezokuphepha, kubukeka kumangalisa futhi kuyethusa.
Isifundo se-Certified Ethical Hacker siyabiza. Ngithathe izifundo zami ze-CEH eLondon futhi kwabiza u- £ 2000.00. Isebenza izinsuku ezinhlanu, kusukela ngo-9 ekuseni kuya ku-5 ntambama. Uthola ukudala ilebhu yakho ukwenza izivivinyo. Isifundo siyingxube yomqondo wokuziqhelanisa nowokwenza ngezandla, okukhombisa izinhlobo ezahlukahlukene zamasu wokugenca.
Kubalulekile ukuqaphela ukuthi inkambo ye-CEH ihloselwe ohlangothini oluhlaselayo kunokuzivikela. Yebo, iyakhuluma ngezilawuli nezinyathelo zokuphikisa, kepha izokufundisa nokuthi ungazidlula kanjani lezo zilawuli.
Inothi lezeluleko: zenze ujwayelane nezisekelo zokuxhumana nokuvikeleka ngaphambi ukuthatha inkambo ye-CEH.
Ngithathe lesi sifundo ngaphandle kokwazi izisekelo futhi ingxenye enkulu, bengingazi lutho. Ukube bengizazi izisekelo, bekuzongisiza okuningi kakhulu ukuqonda imiqondo yalokho obekukhonjiswa esifundweni.
Kimina, kwakungokuningi ngokufunda imiqondo emisha nokuthola ukuqonda okujulile kobuchwepheshe ngokujwayelekile.
Ngenkathi ngiqhubeka nomsebenzi wami wokuhlolwa kwesoftware, ngezwa ukuthi kuyinqubekela phambili yemvelo ukuthuthela ekuhlolweni kokuphepha nokungena. Ngemuva kwakho konke, uma ufuna ukubheka ikhwalithi ngokuphelele, kufanele uyibuke kuzo zonke izinhlangothi futhi ungagxili ekuhlolweni okusebenzayo.
Uhlelo Lokufunda kanye Nemithombo
Njengoba kushiwo ngaphambili, kimi isifundo se-CEH besingivula amehlo maqondana nokuthi bengingazi kangakanani. Ukuze ngiphumelele isivivinyo, ngangazi ukuthi kufanele ngichithe isikhathi esiningi nomzamo wokuzifundela. Bekufanele ngifunde imiqondo emisha eminingi.
Njengoba sengivele ngisebenza isikhathi esigcwele, noma ikuphi ukuzifundela bekufanele kwenziwe ngemuva kwamahora okusebenza, imvamisa kusihlwa nangezimpelasonto.
Ngaqala uhlelo lwami lokuzifundela ekuqaleni kukaJuni 2019 futhi ngaqala nge-Linux Academy's Certified Ethical Hacker (CEH) Perp Course. Kumayelana namahora angama-37 wamavidiyo futhi ihlanganisa zonke izihloko ze-CEH v10 Syllabus.
Kungithathe cishe izinyanga ze-2 ukuthola wonke amavidiyo namalebhu.
Ngo-Agasti 2019, ngathenga incwadi kaMatt Walker's All in One (AIO) CEH futhi kwaba utshalomali olungcono kakhulu.
Cishe ngasikhathi sinye, ngabuye ngabekisa ukuhlolwa kwami, okuzothathwa ngomhlaka 31 Okthoba 2019.
Ngifunde ikhava yencwadi kaMatt Walker ukumboza kabili esikhathini esiyizinyanga ezi-2. Ngiphinde ngenza izivivinyo ekupheleni kwesahluko ngasinye futhi ngazama amanye amathuluzi.
Ngigweme ukwenza noma yiziphi izivivinyo zokuzijwayeza ngize ngibe namaviki ama-2 kude nosuku lokuhlolwa lwangempela. Isizathu ukuthi, bengingafuni ukugxila kuphela kwimibuzo yezivivinyo. Bengifuna ukuqonda imiqondo kuqala bese ngizama izivivinyo zokuzijwayeza.
Maphakathi no-Okthoba, ngangifunde zonke izinto ezisencwadini kaMatt Walker, ngase ngibone amavidiyo amaningi futhi ngathola imininingwane emithonjeni ehlukahlukene - Bheka isigaba se-Reference ekugcineni kwalokhu okuthunyelwe.
Ngokuyisisekelo, emavikini amabili edlule ngaphambi kokuhlolwa kwangempela, ngenze izivivinyo eziningi zokuzijwayeza ngiphinde ngafunda izindawo ebengizabalaza ngazo.
Isivivinyo sokuqala sokuzijwayeza engisizamile yiso esivela eLinux Academy. Mayelana nobunzima, ngingasho ukuthi bekuhambisana nokuhlolwa kwangempela.
Ngokulandelayo, ngazama imibuzo engama-300, izivivinyo zokuzijwayeza, eza njengengxenye yencwadi kaMat Walker ye-AIO. Ngithole ukuthi imibuzo ilula kancane kunezivivinyo zangempela.
Ngokuhambisana nokuthatha izivivinyo, ngathenga nencwadi kaMatt Walker's AIO ehambisana nemibuzo esahlukweni ngasinye sencwadi. Ngithole leyo mibuzo inzima kakhulu kunezivivinyo zangempela.
Futhi ngigcine okungcono kakhulu kokugcina, iBoson Exam Simulator yeECH v10, enenani eliphelele lemibuzo engu-600 yokwenza.
Ngizamile zonke izivivinyo zokuzijwayeza ezine, ngasinye siyimibuzo eyi-125. Ngithole ukuthi imibuzo yokuhlolwa icishe ibe sezingeni lobunzima elilingana nelokuhlolwa kwangempela, yize abanye bethi kunzima kakhulu.
Into enhle ngezivivinyo zeBoson izincazelo eziphelele ezinikezwe umbuzo ngamunye. Akunandaba noma ngabe uwuthola ulungile noma ungalungile umbuzo, funda lezo zincazelo. Zifundisa kakhulu futhi ziba usizo kakhulu ngesikhathi sokuhlolwa kwangempela.
Amaphuzu ami aphakathi nezivivinyo zeBoson ayesezingeni elingama-80%.
Ngosuku olungaphambi kokuhlolwa, ngangigxile kuphela ezindaweni lapho ngingazange ngithole khona kahle izivivinyo zokuzijwayeza.
Kusihlwa ngaphambi kokuhlolwa ngibeke yonke into kude futhi ngivele ngakhululeka ngosuku olukhulu.
Isivivinyo se-CEH v10
Ukuhlolwa kuyimibuzo engu-125 yokuzikhethela futhi unikezwa amahora angu-4 ukuqedela isivivinyo.
Into yokuqala okufanele uyiqaphele ukuthi amahora ama-4 ayindlela engaphezu kwesikhathi esanele sokuqedela imibuzo eyi-125. Akufanele wethuke noma ukhathazeke ngokushoda kwesikhathi.
Cishe i-50% yemibuzo yezivivinyo, kufanele ukwazi ukuphendula ngaphansi kwemizuzwana engama-30.
Lapho ngenza izivivinyo zokuzijwayeza, ngangikwazi ukuqeda yonke imibuzo eyi-125 ngaphansi kwamahora amabili.
Ekuhlolweni kwangempela, ngiphinde ngaqeda ngamahora ama-2, kepha ngichithe cishe eminye imizuzu engama-20 ngibuyekeza imibuzo nezimpendulo.
Isikolo esidlulayo se-CEH v10 yinoma yini kusuka kuma-60% kuye kuma-85% kuya ngezinga lobunzima bemibuzo.
Ngiphumelele isivivinyo ngamaphuzu we- 87.2% .
Ngingasho ukuthi ukuhlolwa kwakunzima impela ngomqondo wokuthi kunemibuzo enezimpendulo ezifanayo. Kulezi zinhlobo zemibuzo, udinga ukwazi ukuphepha ngokuphelele. Futhi kule mibuzo, ukusebenzisa ingqondo kuvamile.
Kwakukhona nenqwaba yemibuzo eyayenzelwe ukukukhubekisa, ngakho-ke qaphela kakhulu okubonakala kuyimpendulo eyiyo. Lapho ufunda umbuzo ngokucophelela futhi ufunda izimpendulo ngokucophelela, imvamisa ungabona ubuqili!
Ngithole ukuthi ukuhlolwa okuphelele kugxile kakhulu kulwazi oluphelele lokuphepha.
Ngokuqondene namathuluzi, bekukhona imibuzo ku-Nmap syntax, Wireshark, Snort, OpenSSL, Netstat, Hping.
Futhi nedlanzana lemibuzo ngezindlela zokugenca. Futhi kuzindlela zokuskena, izinhlobo zezinhlobo zokuskena kwetheku, izinombolo zamachweba nezimpendulo zokubuyisa ezivela emachwebeni avulekile navalwe.
Angikwazi ukusho ukuthi iyiphi indawo noma yiliphi ithuluzi ebelivelele kakhulu esivivinyweni. Le mibuzo ibibukeka isuselwa kuhlelo oluphelele lwesilabhasi ye-CEH v10. Imibuzo yokuhlolwa ihlolwe kuzo zonke izihloko futhi ezimweni eziningi ngokujula okukhulu.
Ngakhululeka impela lapho ukuhlolwa kuqeda njengoba bekuwumsebenzi wokukhathaza ingqondo. Kufanele ugxile impela ekufundeni kanzima umbuzo ngamunye izimpendulo zawo ngokuningiliziwe.
Njengoba kushiwo ngaphambili, ngithole eminye imibuzo yakhelwe ngamabomu ukuthi ibe yinkohliso, ukuze ukhethe impendulo ebonakalayo. Ithiphu ukufunda umbuzo ngamunye ngokuningiliziwe, futhi imvamisa ungabona ubuqili.
Ngemuva kokuhlangenwe nakho kokufunda nokuthatha ukuhlolwa kwe-CEH, ngingasho ukuthi kuwufanele umzamo. Kungifundise izisekelo eziningi ngokuphepha nokuxhumana nabantu.
Into eyodwa mayelana nokwenza isivivinyo ukuthi ikuphoqa ukuthi ufunde futhi ufunde leyo nto kahle.
Kwakudinga ukuzinikezela okuningi futhi kusihlwa okuningi kokuzifundela kodwa ngiyajabula ngemiphumela.
Uma ufundela ukuhlolwa, qiniseka ukuthi udlula kukho konke okuqukethwe isilabhasi ye-CEH v10 ngaphambi kokuzama izivivinyo zokuzijwayeza. Qiniseka ukuthi uyiqonda kahle imiqondo. Futhi ekugcineni yenza izivivinyo eziningi zokuzijwayeza ngangokunokwenzeka ngaphambi kokuhlolwa kwangempela.
I-Ethical Hacker eqinisekisiwe (CEH)
UMat Walker's CEH v10 All In One Study Guide
UMat Walker's CEH v10 All In One Practice Exams
IScotty M Craig CEH v10 Umhlahlandlela Wokufunda
Amanothi angama-brute-F0rce CEH
Amanothi we-G0rbe CEH
Isivivinyo seBoson CEH
ungaqhathanisa kanjani izinhlu ezimbili kuJava
I-Node.js - Isibonelo se-Hello World HTTP Server
I-Bash For Loop futhi Ngenkathi Izibonelo zeLuphu
Yini ama-Oracle wokuhlola kanye ne-Heuristics yokuhlola?
Inhloso ye-Overriding toString () Indlela eJava
Ungayiqhuba kanjani iWebDriver ngemodi engenakhanda
Ukuhlolwa okuzenzakalelayo Ngesikhathi se-Sprint
Guqula uhla lube luhlu ku-Java
Ukuhlaziywa Okuqinile vs Ukuhlaziywa Okunamandla Ekuhloleni Isoftware